विकासमा बेथिति, खेत विनाको कुलोमा १६ लाख खर्च – Rara Khabar
विकासमा बेथिति, खेत विनाको कुलोमा १६ लाख खर्च
बाटुले सिचाई योजनाका लागि देखाइएको बगर । तस्विर बद्री पन्त
जाजरकोट १६, असोज
पजारु १, स्याङ्ग्रीमा बाटुले सिंचाई योजना निर्माणाधीन छ । तर उक्त स्थानमा निर्माणाधीन कुलोले सिंचाई गर्ने खेतको भने अभाव छ । सिंचाई गर्ने जमिन तथा खेत नभए पनि आर्थिक बर्ष २०७१÷७२ देखि योजना क्रमागत रुपमा निर्माणाधीन छ । चालु आर्थिक बर्षमा पनि कुलो निर्माणका थप बजेट स्विकृत भएको छ ।
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय जाजरकोटले सिंचित जमिन नै नभएको ठाउमा कुलो बनाउन लाग्दा स्थानीय बासिन्दा अचम्मित भएका छन् । कार्यालयले साना सिंचाई नदी नियन्त्रण पुर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट उक्त योजनाका लागि १६ लाख खर्च गरी सकेको छ । कार्यालयको अभिलेखमा योजना शुरु भएको पहिलो बर्ष ९ लाख ५९ हजार र दोस्रो बर्ष ६ लाख ७१ हजार खर्च भएको देखिन्छ ।
बजेट आउदैछ, कुलो बन्दैछ । अन्नबाली लगाउने जमिन भने छैन । जमिन नभएकै स्थानमा कुलो बनेको स्थानीय कृतीबहादुर हमालले बताए । खोलाको किनारामा बगरैबगर छ । किन कुलो निर्माण गरेको सबैलाई अचम्म लागेको छ, उनले भने । यो योजना राजनिति दलका कार्यकताले बा“डीचुडी खाने मेलो भएको हमालले बताए । बाटुले कुलो कसैंका लागि दुहुनो गाई बनेको छ, हमालले भने ।
कुलो निर्माण क्षेत्रमा ५५ घर परिवार र १ सय ८९ रोपनी खेत रहेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जहा“को बगरकै हिशाव निकाल्दा पनि जग्गाको क्षेत्रफल १० रोपनी पुग्दैन । त्यस्तै, यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने घरपरिवारको संख्या पनि शुन्य छ । नक्कली तथ्यांक देखाएर सरकारी बजेटको दुरुपयोग गरेको हमालले बताए ।
जिल्ला विकास समितिले हचुवामा कुलो निर्माण योजना स्विकृत गरेको उनले बताए । कसैको ब्यक्रिगत स्वार्थ पुरा गर्न मात्र कुलोमा बजेट परेको हमालले बताए । बर्षेनी आएको रकमले अलि अलि काम गरेको देखाउने र बा“की टा“ठाबाठाको खल्तीमा जाने गरेको उनले बताए ।
जे एण्ड आर कन्स्ट्रक्सन प्रालि जाउलाखेल काठमाण्डौले कुलो निर्माणका लागि २ बर्ष अघि सर्भे डिजाइन गरेको थियो । प्रालिले १ किलोमीटर कुलोका लागि २५ लाखको बजेटको लागत डिजाइन गरेको थियो । निर्माण क्षेत्रमा नपुगेरै सर्भे डिजाइनको प्रतिवेदन बनाउने गर्दा सरकारी बजेट दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ । खेत नभएको ठाउमा कुलो निर्माण गर्नु भनेको सरकारी बजेट सकाउने नियत मात्र भएको स्थानीय विकास अधिकारी इन्द्र गौतमले बताए । प्राविधीकले खेतै नहुने ठाउमा किन कलो निर्माण गर्न लगाएको होला ? के हेरेर रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्छन् ? प्राविधीक साथीहरुको पनि बद्मासी देखिन्छ, उनले भने । स्थलगत अध्ययन गरेर थप रकम निकासामा रोक गाउने स्थानीय विकास अधिकारी गौतमको भनाइ छ ।
प्रकाशित मितिः १६ आश्विन २०७३, आईतवार ०६:४०